Mitambo yehuropi 🥇tamba pamhepo mahara kubva kuna Emulator.online
Mitambo yeBongo. Kukudziridza kufunga zvine musoro kuburikidza Mitambo yeBongo inokosha. Kwete chete izvo zvinokubatsira iwe kuwana mibairo yakanaka mubvunzurudzo yebasa kana bvunzo dzekoreji, asi zvakare yakave inobatsira mukuchengetedza uropi hwako kudzidzira, kuvandudza ndangariro, uye kuita nyore mabasa kuita .
Kana iwe uchifunga kuti hauna kudzidzisa uropi hwako kwechinguva, iwe unofanirwa kutanga kuzviita. Iwe unofanirwa kuziva kuti yavo kugona kusimudzira nekudzidza inoramba iripo kusvika kumagumo ehupenyu, saka haina kunonoka kudzidzisa kufunga kwako.
BrainGames: maitiro ekutamba nhanho nhanho? 💡
To play checkers online for free, chete tevera iyi nhanho-nhanho mirairo :
Step 1 . Vhura yako yaunoda browser uye enda kune Emulator.online mutambo Website.
Step 2 . Ukangopinda webhusaiti, mutambo unenge watotaridza pachiratidziri. Ungofanire kubhuya tamba uye iwe unogona kutanga kutamba.
Step 3. Heano mamwe mabhatani anobatsira. Unogona " Wedzera kana bvisa ruzha ", rova" tamba "bhatani uye tanga kutamba, unogona" Pause "Uye" Dzorerazve "chero nguva.
Step 4. Ita kuti makadhi arambe achifunga kuti iwo anofanira kunge achibva kune vaviri vaviri. Mutambo unopera kana iwe uchikwanisa kukwidza ese makadhi. Ukangopedza, iwe uchapasa iyo nhanho kusvikira wapedza mutambo.
Zvinoreva Brain Game 🙂
Mitambo Yehuropi, kana mitambo yekufunga , mitambo inosimudzira uye inosimudzira kufunga kwevanhu zvine musoro kuti uwane kugona kwakanaka.
Iyi mitambo ine hunhu yekukudziridza chikamu chemunhu, kuita kuti mushandisi ashandise, kusvika padanho guru, divi ravo rehungwaru kuti vawane mhinduro kwayo.
Iyi mitambo yekufunga inoshandiswa zvakanyanya nevarapi. Ose maviri kuraira kwezvechiremba, sechikamu chemiitiro yekugara, vanhu vakuru vanoita izvi kurovedza muviri kuitira kudzivirira zvirwere.
Mienzaniso yeBongo Game inosanganisira crosswords, izwi mapipizvirahwe, Sudoku mapipi uye yakareba etc.
Zvakanakira Brain Game mitambo
Kurovedza muviri kunobatsira zvikuru. Zvinoenderana nezvidzidzo, zvimwe ndangariro kudzidziswa kurovedza kunogona kuwedzera "ungwaru kuyerera," kugona kufunga nekugadzirisa matambudziko matsva.
Pane maviri mutambo modhi dzeBongo Mitambo. Pane mumwe munhu mitambo nemitambo yeboka.
Yemunhu Brain Mitambo kurudzira zvine musoro, kuongorora, kuona zvine mutsindo, kufambisa mota, kushanda ndangariro, uye kufunga kwepashure.
Kana munhu akatamba ari ega, vanoona nguva yekufungisisa uye kushandisa simba ravo kududzira uye kugadzirisa matambudziko . Panguva iyoyo, iwe unokwanisa kugadzira ekuongorora uye ehupenyu-anoshanda masystem.
Mitambo yekubatanidza , ivo tevedzera kukwikwidza uye / kana mushandirapamwe mamiriro , kuisa mukuita hunyanzvi hwese hwataurwa pamusoro, pamusoro pehukama hwevamwe.
Zvino zvatava kuziva zvakanakira kuva nepfungwa dzinoshanda, zvingave zvakanaka kuzviita inosanganisira Brain Game kurovedza mune yedu yemazuva ese maitiro nenzira kuti ubatsirwe nekugadziridzwa uku kwese uye uwane pfungwa yakakura.
Mhando dzeMitambo yeBongo 💡
Mutambo wakagadzirwa neAmerican Howard Garns uye unobatsira mu kudzidziswa kwekufunga kwemasvomhu zvine musoro, kuisa pfungwa uye kuronga . Unogona kuiwana online kana mumagazini.
Kutamba cheki kunoita kuti isu kurovedza muviri ese uropi hemispheres . Nyanzvi dzezvepfungwa uye vezveurouroologist vakafunda mashandiro emitambo mitambo yehuropi, uye zvakawanikwa kuti kutamba macheki kunokonzera mapoka enzvimbo dzehuropi kumisikidza panguva imwe chete, izvo zvakare zvinobatsira kudzivirira Alzheimer's.
Kubva kune ivo vakagadzira veAngry Shiri, iyo inoshamisa Alex mutambo inokurudzira mushandisi ku kukudziridza hunyanzvi hwavo hwekuronga kuitira kugadzirisa matambudziko aripo uye kupasa nhanho.
Mumutambo uyu mushandisi ane basa rekubatanidza machubhu mune iwo iwo mavara uye gadzira akateedzana. Pane zvinetswa zvinoverengeka izvo batsira nekufunga, kugadzirisa matambudziko, kunetseka, uye kuisa pfungwa.
Mutambo wekare uyo uchiri kugona kukwezva vatambi vanobva pasirese pasirese. Icho chirevo chiri nyore: kukwanisa fomu mazwi mukati mekatekete yetsamba mavara . Pamusoro pevashanduro dzakadhindwa mumagazini, zvinokwanisika kuwana mutambo wema mobile shanduro.
Inofungidzirwa mutambo, chess inovandudza fungidziro, kugona, kusimudzira kwehukama, kugona nekuziva hunyanzvi . Uye zvakare, mutambo uyu mubatsiri akakosha pakudzidziswa kwehuropi. Mutambo unogona kutambiswa panyama kana online pane chess mutambo mawebhusaiti nemaapplication.
Nemitambo yeBongo iyi iwe unogona kudzidzisa pfungwa dzako uye nekugona kubata zvirinani nemibvunzo ine musoro, kungave kwebvunzo dzako kana kungoti nekuti iwe unoda kuchengeta pfungwa dzako dziri muchimiro.
Mitemo YeBongo Mitemo📏
Logic mitambo haina mitemo yepasirese, yega yega inotambwa nemitemo yayo, asi vane chimwe chinhu chakafanana.
Tinofanira kudaro shandisa ruzivo rwekuziva senge kutarisa, kucherechedza, kuzivisa, kuenzanisa, kutsvaga. Uye shandisa zvine musoro kufunga, kuronga kumberi, kuita sarudzo uye kunyangwe intuition kukwanisa kutamba mitambo zvakatsetseka uye nehunyanzvi.
Sezvo muenzaniso weBongo Game isu tinogona kushandisa chess . Kana tikaverenga mitemo yayo, mafambiro, nzira dzinogona kuteverwa kubvuta zvidimbu kubva kumuvengi uye tozopedzisira tauraya Mambo, tinogona kuwana pfungwa yekuoma kunzwisisa uye kunakisa kworudzi urwu rwevaraidzo mupfungwa dzedu.
Mitambo Yepfungwa Matipi 🤓
Logic mitambo inoisa chinetso kuhuropi hwedu, uye kunyangwe kushivirira kwedu. Paunenge uchisarudza Brain Game, tanga nemitambo yakapusa inopokana nepfungwa dzako.
Zvimwe zviri nyore asi zvinonakidza zviri ndangariro mitambo . Kutanga nekurangarira chinzvimbo uye kudhirowa kwemakadhi mashoma, uye wedzera iyo nhamba sekubata kwako kugona kuwedzera. Kunze kwekupa mubayiro, iri mutambo wemazera ese , saka unogona kutamba nevana vako.
Chinangwa chikuru chemitambo iyi chinonakidza, nekuti nekukuvaraidza, vanozoita kuti pfungwa dzako dzisanete nekukurumidza uye hunyanzvi hwekuziva izvo zvinonetsa izvi zvinogona kuva dzakasimukira , ndisingambozvizivi.
Tora mukana we mabhenefiti mazhinji ayo Mhando dzeBongo dzinopa uye unakirwe nezviuru zvemitambo iri mukati memhuri iyi.
Chii chauri kumirira kurova play?